Gemelo digital, la nueva apuesta de Bentley – Geofumadas
Ikhaya/Microstation-Bentley/iwele Digital, ukubheja entsha Bentley kaThixo
iwele Digital, ukubheja entsha Bentley kaThixo
Okomzuzwana bendinokuthandabuza, ukuba uBentley ebethetha ngefomathi entsha eza kuthatha indawo ye-dgnV8, ndiye ndacinga ukuba luhlobo lwefomathi ecinezelweyo njenge-kmz kunye ne-Google Earth's kml. Kwiinyanga ezininzi ezidlulileyo ndenze iposti, ndifuna ukuyicinga loo nto oko kwakuthetha i-V8i, emva kwenkqubo eyenziwe kwiSymposium kwaye nangona ndiqinisekile ukuba le nto iqhubekile, ndicinga ukuba ndiqonda oko kuthetha (i-ria) i.
Se trata del I-model (gemelo digital), una apuesta a la que Bentley está aspirando, que posiblemente revolucionará la forma de ver sus productos y su formato dgn/dwg/dxf V8. Aunque lo que nos mostraron solo fue un breef, ya en las versiones V8i si qalile a experimentar que es lo que traman estos amigos y que significa I-model (gemelo digital) para Bentley.
Gemelo digital hacia Bentley
I-Bentley, ilula kakhulu, ukuhlanganiswa kwamandla kwiProjekthi yoBulumko kunye ne-Microstation, iimveliso eziphambili ukuba kude kube ngoku baye basebenzela: enye ukulawula amaxwebhu, enye ukuqhuba idatha yendawo.
Ngomzekelo we-I-Bentley unethemba lokuzisa i-ProjectWise Navigator ekusebenziseni okuphucukileyo, okwangoku kuthathelwa ingqalelo njengesixhobo esiphakathi esinzima sokuphumeza iiprojekthi ezilula. Kuthetha ukuba ukuhamba komsebenzi kuya kuhlawuliswa kwinto esele yenziwe yiProjekthi kodwa phantsi kolawulo lwedatha, ngokulandela imigangatho kunye nokudityaniswa izixhobo ezahlukeneyo ye-geoengineering yokuba iBentley izuze kwaye yakha kwakhona kwi-XM.
Ngelixa kwinqanaba le-Microstation, ifomathi ye-dgn ngoku iya kudibanisa idatha ye-xml evela kubuchule obahlukeneyo, eyakhiwe ngendlela efanayo naleyo bayenzileyo nge-xfm. I-Bentley View iya kutshintshwa yi-ProjectWise Navigator, asazi ukuba iya kuhlala isimahla kwaye iMicrostation izakufumana iipropathi ezineProjekthiWise lite.
Gemelo Digital hacia el usuario de Bentley
Inzuzo yomsebenzisi ibanzi, njengoko inokuphucula amandla okusebenza kunye kwidatha efanayo, ulibale umxholo weefayile. Ukwenza umzekelo, kwifayile yohlobo lwe-I-modeli, amagcisa e-cadastre anokukhuphela idatha yabo ngokuchaneka kwe-millimeter, ngelixa abasebenzisi be-GIS beza kwenza i-topological layments ukwenza uhlalutyo lomhlaba, iinjineli zendlela ziya kuzobeka izihlokwana Umsebenzi omtsha kunye nowenkonzo zoluntu ukwandiswa kwenethiwekhi. Yonke into, enemigangatho yezobugcisa ehlengahlengisiweyo ukuze ihambelane ngokobungcali, kubonakala ngathi zisebenza kwifayile enye enobunzima obungama-20% bezinto ezinokuba ziifayile ezizezinye, ezinamalungelo ngomsebenzisi ngamnye kunye nokugcina imbali yotshintsho egciniweyo. Ke, imeko yesiqhelo sendawo iya kwenza umgca ofanayo kumda wepropathi ye-cadastre, kucwangciso lwedolophu udonga lokugcina, kwimisebenzi yoluntu ulwakhiwo lokunciphisa kunye noyilo lodonga lomkhusane; Umsebenzi olula wokungena kwamalungelo kunye notshintsho kulawulo lwamkela iiflegi.
Emva koko umpapashi weGeoweb uphakamisa ifayile ukuyipapasha kwi-Intranet okanye kwi-Intanethi, nge-VPR ephuculweyo eqonda iindlela zokufunda ezilula (i-WMS, i-WCS), i-redline iguquke yaya kuhlelo olulawulwayo nge (WFS-T). Ukwenza oko ikwenzileyo, ngoku ihlonipha imigangatho kwaye inxulumene nokuthengiselana namalungelo, ukutyikitya kwidijithali kunye nolawulo zembali.
Umsi ubonakala ngathi yi-astral, kodwa ngumbono we-BIM osetyenziselwa ukuhamba komsebenzi okwenzeka yonke imihla kwindawo yokwenyani. Qaphela, konke oku kunokwenziwa ngeMicrostation kunye neProjekthiWise, kodwa idatha ingaphandle okanye akukho ntlangano incinci kwinqanaba le-xml, yintoni ekhoyo njengesixhumanisi esifana naleyo ye-mslinks ye Geographics; Ngenxa yoko, ndidibanisa le nguqulelo kakhulu ngokuphunyezwa kwe xfm icetywayo ngo-2005, idityaniswe kwiBentley Imephu XM. Ukuba ifomathi ye-V8 icaciswe kakuhle, kwaye ixhasa i-xml ukusukela ngaloo mhla, ngekhe sibe nefomathi entsha ye-V8i, iinguqulelo ezintsha zeemveliso ze-Bentley ziya kuba nakho ukufunda idatha eyakhiwe ngokwenqanaba labo lobungcali. Iinguqulelo ngaphambi kwe-V8i zaziza kufunda i-dgn ngaphandle kokuzibona iimpawu ze-xml njengoko ngoku zibona ifayile eqhutywa neMephu yeBentley eneMicrostation eqhelekileyo.
Gemelo Digital hacia el usuario de otras marcas
Apha kubonakala kungoyena mceli mngeni unamandla, umlinganiso wokudityaniswa kwe-AutoDesk Revit, evumela idatha ukuba isebenze kwi-Bentley Architecture ibonakala ngathi sisikhokelo, kwaye nangona kukuqagela kwam, iBentley inokuba ifuna ukuya phambili. Masikhumbule ukuba into efanayo ikhona kwiBentley Imephu yokunxibelelana neArcGIS mxd kunye ne-lyr, umahluko ofuna ilayisensi ye-ESRI efakiweyo; inyani yokuba ngoku iyasebenza neRevit ngaphandle kokufuna ilayisensi isenza ukuba sicinge ukuba sisiphumo isivumelwano phakathi kwe-AutoDesk kunye neBentley, ekubeni i-AutoDesk yowokuqala ukukhuthaza imbono yeBIM kwi-Revit.
Ngelixa i-V8i iyakuba yifomathi yokusebenza yabasebenzisi beMicrostation, kubasebenzisi bangaphandle iya kuba yifomathi yotshintshiselwano etyebileyo abanokuthi bafunde kuyo idatha phantsi kwemigangatho eyamkelweyo, hayi okwenziwa yifayile okanye ifayile ekhutshelweyo. Ekugqibeleni, i-BIM ngaphaya kwe-Architecture iyancitshiswa ekutolikeni amanani e-geofumed kwindawo ebonakalayo njengezinto zobomi bokwenene ezihlala zimelwe, njengoko isitsho iTxus. Kukwanokwenzeka ukuba iBentley ijonge ukusebenzisa ngcono iifomathi zayo ze-dxf / ze-dwg, ezisebenze ngaphandle koguquko iminyaka eliqela, kwaye ngoku ngeeplagi eziya kufundwa yi-AutoCAD nazo zonke iimpawu zayo ze-V8i.
Si esto fuera así, un usuario de Civil3D leería en un dwg-i-model (gemelo digital) una superficie construida con Inroads, mientras que un usuario de AutoCAD solo vería el vector que sirvió de fuente primaria, como la malla de puntos. Es lo que espera la generalidad usuarios de diferentes ramas de la creatividad humana llamadas marcas comerciales (incluidas las de código abierto que también son comerciales) y que aspiran que las grandes firmas consideren el término interoperabilidad como un beneficio global y no un abrazo mutuo para cerrar más el círculo.
En conclusión, I-model (gemelo digital) es la implementación de BIM, elawulwa yiProjekthiWise, eqhutywa yi-Microstation kunye ngokuvisisana namanye amaxabiso.
AutoDesk Bentley Systems Dgn Dwg ESRI Umhlaba ka-Google KML egeomates My
Izifundo zeGvSIG eValencia
Jonga i-AutoCAD 2010 njenge-AutoCAD 2007
Iinkqubo zeBentley ziSungula ukuNikezelwa koLuntu okuQala (IPO-IPO)
Ukuthumela ngaphandle kuhambelana ukusuka kwi-CAD ukuya kwi-txt
Ikhosi ye-AutoCAD-funda ngokulula
Le yikhosi eyilelwe ukufunda i-AutoCAD ukusuka ekuqaleni. I-AutoCAD sesona software sithandwayo kuyilo oluncedo ...
I-Autodesk Inventor Nastran yinkqubo enamandla kunye neyomeleleyo yokulinganisa amanani kwiingxaki zobunjineli. INastran yinjineli ...